Mangaki amakhalori asezithombeni ezi-2 zebourbon? - Ukudla
Main > Ukudla > Amakholori ku-bourbon - izixazululo ezintsha
Mangaki amakhalori asezithombeni ezi-2 zebourbon?
Umoya ngamunye uvame ukunambitheka noma ukunongwa.IBourbonuhlobo lwe-whisky, ngakho-ke lezi zotshwala ezintathu zonke ziqukethe cishe okufanayoinani lamakhaloringesiphuzo esijwayelekile. Kukhona cishe i-97ama-caloriesngesiphuzo esijwayelekile se-rum, i-whisky nebourbon.
Akunakuphikwa ukuthi eziningi zalezi ziphuzo ezigcwele i-carb, ikhalori ephezulu, neziphuzo ezigcwele ushukela akukuhle kuwe noma okhalweni lwakho. Kepha khetha ngokuhlakanipha ukhethe lesi siphuzo futhi uzothola ukuthi ungazithela ngesiphuzo sabantu abadala ukuze uthole izinzuzo zangempela zempilo. Ubuza siphi isiphuzo, ubuza? 'Hwhiskey.' Awusho 'i-whisky?' '' 'Hwwas? '' Usho ngendlela ehlekisayo. '' Uyasho ukuthi yini i-hskurril? 'I-Red Wine Uma kukhulunywa ngesiphuzo esidakayo esinemihlomulo yezempilo sithola konke ukucindezelwa okuhle, kepha ucwaningo lwesayensi lukhombisa ukuthi empeleni yibhodlela likagologo okufanele ngabe ukulwela, yingakho-ke.
Ezikhathini zasendulo, i-whisky yake yenzelwa ukusetshenziswa kwezokwelapha yayijwayele ukudluliswa ezinkundleni zempi ngemuva kwegazi, futhi yayivame ukusetshenziswa njenge-antiseptic. Kuyisiqeshana se-movie, impela, kepha ucwaningo olushicilelwe ku- Annals of Microbiology lunikeze lo mkhuba ukwethembeka okugcwele. Ucwaningo lubheke ukuthi zingaki izinhlobo ezahlukahlukene zamagciwane ezingasinda ku-ayisikhilimu etholakala endaweni yokudlela i-bar r, futhi ake sithi akuzona izindaba ezinhle. Izinhlobo ezingama-31 ezahlukahlukene zamagciwane zitholakele, kufaka phakathi leyo ebanga ukutheleleka kwe-staphin.
Abacwaningi babe sebekala ukumelana kwabo nezinhlobo ezahlukene zotshwala, kufaka phakathi i-whisky ne-vodka, kanye nezinhlobo ezahlukahlukene zokuxuba nezimo ezahlukahlukene zemvelo. Amagciwane ayachuma futhi abhukude futhi enze okwenziwa amabhaktheriya kuwo wonke amasampula ngaphandle kweyodwa: iwhisky kwakuwukuphela kwesiphuzo esasusa zonke izinhlobo zamagciwane. Ingabe kufanele uhambe nebhodlela le-whisky njalo? Uyaphuma? Ingabe kufanele u-ode iwhisky kuphela ezindaweni zokudlela nasemabha? Asizelanga ukuzokutshela ukuthi kufanele uyiphile kanjani impilo yakho.
Kepha yebo, mhlawumbe lokho kubambezela kancane, buddy kakhulu futhi ngokushesha okukhulu. 'Kodwa kuphela ngenxa yokuthi Ukungakuxwayisi ukuthi ube nesibambo ubusuku nemini akusho ukuthi isiphuzo esisezingeni elifanele njalo njalo asikwazi ukwenza izimangaliso. UJones wayeneminyaka engu-112 ubudala.
I-NPR ikhulume nalona wesifazane omdala wase-UK, owaziwa ngabangani bakhe njengo-Amazing Grace, wambuza ukuthi uthini ngempilo yakhe ende. Impendulo Yakho? Ukuzijwayeza kwakhe ukuphuza ingilazi ye-malt whisky njalo ebusuku ngaphambi kokulala kubanga ukuthi impilo yakhe iphilwa yi-whisky yasebusuku ayithandayo. 'Ithonsi elincane le-whisky, angiphuzi okunye.' Kuzwakala kukuhle kakhulu Ukuthi kube yiqiniso, akunjalo? Kungahle kungenzeki.
Ucwaningo oluningi lwesayensi luye lwabonisa ukuthi i-whisky inezici ezithile ezithakazelisayo. Thatha ukuhlushwa okuphezulu kwe-ellagic acid. Lawa ama-antioxidants asiza umzimba wakho ukubhubhisa amaseli anamandla.
Ngamanye amagama, kuyasiza ukulwa nezifo eziningi ezahlukahlukene. Kepha i-whisky inamanye alawa maqhawe amancane. Uma sikhuluma ngama-antioxidants, ake sibheke inkolelo endala yokuthi ingane encane eshisayo iyilokho udokotela akuyalile uma unemikhuhlane.
Isiphuzo ngokwesiko senziwa ngokushisayo. Amanzi, i-whisky, uju nolamula okwenziwe ngokuyisisekelo kungumuthi, ngokusho kukaDkt.William Schaffner, onguSihlalo Wezokuvikela Imithi eVanderbilt University.
Kulungile, mhlawumbe ngeke kulaphe amakhaza akho, kepha kuzokhulula izimpawu zakho. Amanzi ashisayo azosiza ukuqeda isiminyaminya, kanti uju lolu luju luzodambisa umphimbo wakho obuhlungu. Okwamanje, le whisky yemilingo izokwandisa imithambo yegazi, ikhulule umuzwa wokukhukhumala, futhi ikhuthaze amasosha akho omzimba ukubhekana nokutheleleka.
Inganyana eshisayo ngaphambi nje kokulala nayo ingakusiza ukuthi ulale ngokushesha, futhi ukulala ukulala iqhawe langempela lapha. Ngokumangazayo, lonke lolu cwaningo lwesayensi luqinisekisa kuphela lokho okhokho bethu abebekwazi vele, kusho iScotland. Lesi siphuzo sendabuko sase-Ireland naseBrithani ekuqaleni sasibizwa nge-Uisge Beatha, esihumusha njengamanzi okuphila, futhi incwadi yekhulu le-16 lesazi-mlando okuthiwa uRaphael Holinshed ikhombisa ukuthi i-whisky eyigugu yayiyinhlanhla kanjani.
Uyabhala: 'Kuthathwa ngokulinganisela, kubambezela ukuguga, kusika i-phlegm, kusiza ukugaya, kuphulukisa ukuconsa, kulapha i-stran goulash, kugcina ikhanda lingazulazuli, ulimi lungaqhamuki, isisu ekuxegweni abaye bathola amathumbu avela ekudumeni, izandla ezivela ukuthuthumela, amathambo ngenxa yobuhlungu awukwazi ukuthola isincomo esinamandla kakhulu, akunjalo? Manje njengoba isayensi isiqala ukuqinisekisa yonke i-whisky yokudumisa eqoqwe eminyakeni edlule futhi kuyacaca ukuthi i-whisky ingaphezu kokuhlangana neso, unazo zonke izizathu odinga ukuzithenga ngamabhodlela ambalwa ngaphezu kokugcina kuphela izikhathi ezikhethekile.
Ingani wonke umuntu uyasazi isisho sakudala esithi: “Ushaka we-whisky uyingozi enkulu. Ushaka kabhiya ungunjiniyela wobhiya. 'Noma into enjalo
Bheka enye yezindatshana zethu zakamuva lapha! Ama-athikili amaningi abunjiwe mayelana nezinto zakho eziyintandokazi azolandela kungekudala. Bhalisela isiteshi sethu se-YouTube bese ushaya insimbi ukuze ungalahli neyodwa.
Ingabe iBourbon ilungele ukwehla kwesisindo?
Ngenkathi ukuphuza i-whisky akufanele kufake esikhundleni sempiloukudlanokuzivocavoca umzimba, izifundo zikhombisile ukuthi zingasiza ngeukuncipha komzimba.IBourbon, uma kuqhathaniswa nezinye izinketho zotshwala, inenani eliphansi kakhulu lamakholori, ushukela omncane, awekho ama-carbs nama-calories ayi-100 kuphela.Meyi 20, 2020
Uma ufuna ukwazi ukuthi ngiluthathaphi ulwazi lwami, ungabheka le ncazelo engezansi. Futhi ngaphandle kokulibala, asiqale! Ukuqala, ake siqhathanise inani elilinganayo leziphuzo ezidakayo ezidumile futhi silinganise ama-calories abo.
Ngemuva kokuncipha, sigxila kakhulu ekudleni kwekhalori, i-ounce elilodwa le-vodka, i-whisky, i-gin, i-rum, i-rye, noma i-tequila, wonke amabanga aphakathi kwama-calories angama-64 kuya kwangu-70 iwayini elibomvu noma elimhlophe liqukethe phakathi kuka-20-25 wekhalori kabhiya, ikakhulukazi iBudweiser, iqukethe amakhilogremu ayi-12 kuphela wamakhilogremu, noma kulokhu ama-ounces wama-ounces, ubhiya ungumnqobi we-WOO HOO! Kepha uma sikhuluma iqiniso, ubukhulu bokuphakwa kukabhiya newayini kungaphezu kwe-1 ounce, ngiqonde ukuthi ake sibhekane nakho, yimaphi amathuba okuba ne-ounce elilodwa likabhiya noma lewayini bese uliyeka. Kumele kubhekwe isamba sotshwala ngamunye. Ake sikubhekisise lokho.
Ngiqhathanise osayizi abanconywayo bokuphaka utshwala ngakunye nobubanzi ukusuka kokuphakelwa okukodwa kuye kokuphakelwa okuyishumi. Nakhu engize nakho ndawo thile phakathi kwama-khalori ayi-120-1250 nakubhiya uzobe uphuza noma yikuphi phakathi kwamakhalori ayi-154-1600 ngakho-ke uma ufaka usayizi wokuphaka, utshwala bodwa bungumnqobi Kodwa lokhu kungenxa yotshwala obumsulwa kuphela, okuwukuthi uma uthanda iziphuzo ezixutshiwe? Ijusi lewolintshi leVodka ngokwesibonelo ngiqonde ukuthi amawolintshi aphilile, awakwazi ukwengeza amakhalori amaningi, akunjalo? Ukungeza ama-ounces amabili wejusi lewolintshi ku-ounce lakho elilodwa lokuthenga i-vodka kuzokubiza ngama-khalori angama-28, futhi uma ufaka lokho, ukukhetha kwakho okusha kuzoba phakathi kwama-calories angama-88 kuya kwangu-900, okusengaphansi kancane kukabhiya newayini. ..
Kepha ngaphezu kwama-khalori owadlayo, engeza u-5.2g kashukela ngokusebenza ngakunye ekupheleni kobusuku, okungenza kufika ku-52g kashukela
Uma uqhathanisa lokhu nezinye izinhlobo ezimbili zotshwala, kuzokubiza iwayini phakathi kuka-1-12 g ubusuku ngabunye. Futhi ubhiya, yize uqukethe ama-carbohydrate, awunawo ushukela futhi uma ubuke i-athikili yami yangaphambilini, uzofunda ukuthi ushukela nakanjani ungakwenza ukhuluphaleKususelwe kulo lonke lolu lwazi, uma ucabanga ngokusebenzela usayizi, ivolumu, ama-calories, namazinga kashukela Kubonakala sengathi akekho owinile ocacile
Ngakho-ke buyela embuzweni wokuqala, buyini utshwala obuhle kakhulu bokunciphisa isisindo? Uma uzimisele ngokunciphisa isisindo, abukho utshwala ngaphandle lapho obungeke buphazamise imigomo yakho yokwehlisa isisindo. Kepha uma kufanele, amanzi e-vodka ne-soda anokusikisela kukalamula noma ulamula kuyindlela ongakhetha ngayo kakhulu ekhalori. Zizwe ukhululekile ukungazisa emibhalweni engezansi noma ku-Facebook noma ku-Twitter! Futhi uma uyithandile le ndatshana, yabelana ngayo nabangani bakho.
Futhi uma ufuna ngenze okwengeziwe, bhalisa bese ushaya inkinobho enkulu ebomvu. Ngithumela izindatshana ezintsha masonto onke! Kunoma ikuphi, ngiyabonga ngokubuka futhi uhlale uqine!
Ingabe kukhona ama-carbs ku-bourbon?
Ingabe iBourbon ikwenza ukhuluphale?
Ingabe iBourbon inama-calories amaningi?
Manje, kumaqiniso wokudla okunempilo: I-1.5-ounce shot yebourboniqukethe cishe i-97ama-calorieskanye no-0g wama-carbs (kunjalo, kuba nempilo encane uma uqala ukuyixuba nama-sodas kanye nabaxube beshukela). Abaxhasi be-carb ephansiunayobengincoma ukushintshwa kwebhiya kuyebourboniminyaka.Aug 27, 2020
Ngabe iBourbon ilungile ku-keto?
Gwema noma yimaphi amawayini amnandi, i-dessert noma i-fortified wines - njenge-sherry - onke eza nama-carbs athe xaxa. Iya kwimimoya eqondile - Imimoya efana nayobourbon, i-gin, i-rum, i-scotch, i-tequila, i-vodka ne-iwhiskybonke baneziro carbs, kepha BANAKHO ama-calories aqhamuka otshwaleni.
Ingabe i-whisky yandisa amafutha esiswini?
Utshwala bungaba nomthelela okweqileisisindo samafutha
Amakholori angeziwe agcinwa njenge-amafuthaemzimbeni. Ukudla ukudla neziphuzo ezinoshukela omningi kungaholela esondweni ngokusheshainzuzo. Asikwazi ukukhetha ukuthi sonke leso sisindo esengeziwe siphela kuphi. Kodwa umzimba uvame ukuqoqekaamafuthaku-isisuindawo.Feb 27, 2017
Ingabe i-whisky ikhuluphele kakhulu kunobhiya?
Imimoya ivame ukuba ne-bang enkulu kakhulu ngempunzi yakho: Ukudubula nje kwe-iwhisky, i-ginnomarum kungenzeka ikunikeze i-buzz ngokusheshakunephansiubhiya nomaiwayini. Futhi yiziphuzo ezilula futhi eziphansi kakhulu ze-carbohydrate eqenjini: Ukudubula okujwayelekile kwe-iwhisky, tequila, vodka, gin,nomai-rum ine-97ama-calories.Feb 23, 2020
uthwala izindlebe nm
Ukudutshulwa kweBourbon kunamakhalori amangaki?
Ukudubula ngakunye kwe-bourbon okujabulelayo kwandisa ukudla kwakho kwekhalori kosuku cishe ngama-calories ayi-100. I-Bourbon, njengeminye imimoya engama-80, iqukethe isilinganiso samakhalori angama-97 nge-1.5-ounce shot, ngokusho kweNational Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism.
Mangaki amakhalori esiphuzweni se-highball Bourbon?
Le Recipe ye-Highball Bourbon Drink Recipe ingama-calories ayi-131 kuphela ngenxa yosizo lwe-zero calorie ginger ubhiya! Qiniseka ukuthi uthola konke ubhiya bemvelo (awekho ama-sweeteners wokufakelwa) alesi siphuzo nge-bourbon uma ufuna ukunciphisa isisindo, ngoba okokunandisa okufakelwayo kungaba nomthelela omubi emizameni yokwehlisa isisindo.
Ingabe zikhona iziphuzo zekhalori eliphansi ngeBourbon?
Ama-cocktails we-Bourbon alungele amaphathi, noma nje ukujabulela ihora elijabulisayo elenzelwe ekhaya. Zonke lezi ziphuzo ezi-5 nge-bourbon ziphinde zasebenza ngezithako njengayo yonke imvelo, isiraphu elula yekhalori, ukuze zizwakale ngokufanayo. Kepha kuze kufike ku-1/2 wama-calories.